हजुरले "तेन्गु" को कथा सुन्नु भएको छ ? | Japan Info - नेपाली
Japan Info > Japan Info - नेपाली > CULTURE > MYTH > के हजुरले “तेन्गु” को कथा सुन्नु भएको छ ?
के हजुरले “तेन्गु” को कथा सुन्नु भएको छ ?
तेन्गुको खान्जी “天狗” हो। खान्जीको अर्थ हेर्ने हो भने यो शब्द तियन (स्वर्ग) र गोउ (कुकुर) भन्ने चाइनिज क्यारेक्टरबाट बनेको हुन्छ। यो तेन्गु भनिने पात्र जापानी किंबदन्तीको अलौकिक प्राणी हो। यो प्राणीलाई शिन्तो धर्ममा भगवान मानिन्छ। आउनुहोस आज हजुरहरुलाई यो अजब पात्रको जानकारी गराउछु।
यसलाई स्वर्गको कुकुर भनिएता पनि यसको रुप चाहि ठूलो चरा र मान्छे संग मिल्न खोज्छ। यसको टाउको मानिसको जस्तै हुन्छ अनि चराको जस्तै नंग्रा, पखेटा र चुच्चो मुख हुन्छ। कालन्तरमा मानिसले चित्र होस् वा मूर्तिकलामा होस् तेंगुको मुख मानिसजस्तै बनाएर नाकचाहि घिरौला जस्तै लामो बनाएका हुन्।
चीनमा पनि यस्तो प्राणीको किम्बदन्ती सुन्न पाइन्छ। तर चीनको तेन्गु भने नाम अनुसारको कुकुर जस्तै हुन्छ।
प्राचिन कालमा चीनका बुद्ध धर्मावलम्बीहरु तेन्गुलाई राक्षश मान्दथे। उनिहरु तेन्गुले कलह, झगडा र द्वन्द मचाउछ भन्ने सोच्दथे। तेन्गु को ठूलो ठूलो दात हुने र तारा वा धूमकेतु खसेको जस्तै आकाश बाट खस्ने भएकाले जहाँ जान्छन त्यहा सर्बनास गर्छन भन्ने सोच थियो। त्यो राक्षसी कुकुर कसरि लामो नाक भएको चरामा परिणत भयो भन्ने कुरा कतै उल्लेखित छैन।
अहिले तेन्गुलाई जंगल र पहाडमा बस्ने आत्मा मानिन्छ। मानिसहरु तेन्गुले जंगल र पहाडको रक्षा गर्ने बताउछन। तेन्गुको मुखुट जापानमा धेरै लोकप्रिय छ। यो मुखोटा रातो रंगको हुन्छ अनि मुख चाहि छुचो र रिसाएको जस्तो हुन्छ।
जापानी संस्कृतिमा तेन्गु
जापानमा भने तेंगुलाई कहिले पनि देख्दै डरलाग्दो राक्क्षसको रुपमा वर्णन गरिएको छैन | तेन्गुलाई सजिलै झुक्काउन सकिने सोझो जापानमा भने तेंगुलाई कहिले पनि देख्दै डरलाग्दो राक्क्षसको रुपमा वर्णन गरिएको छैन। तेन्गुलाई सजिलै झुक्काउन सकिने सोझो जनावर भनेर कथामा लेखिएको भेटिन्छ। १४ शताब्दी ताका तेन्गुलाई कथाहरुमा द्वन्द र कलहमा संलग्न गराइएको देखिन्छ। मिनामोतो नो योशीचुने भन्ने प्रचलित कथामा एक तेन्गुले योशिचुने भन्ने युवकलाई लडाई गर्न सिकाएको र ति युवकले आफ्नो बुवाको हत्यारासंग बदला लिन सफल भएको उल्लेखित छ। निन्जाहरुलाई पनि तेन्गुले लडाई सिकाएको कथा भेटिन्छ।
आधुनिक युगमा तेन्गुलाई मान्गा, आनिमे, फिल्म, भिडियो गेमको क्यारेक्टरमा देखिन्छ। सुपर मारियो ब्रोज २ मा ट्वीतर भन्ने क्यारेक्टर तेन्गुबाट लिइएको हो। पोकिमोन, दिगिमोन जस्ता गेममा पनि तेन्गुबाट प्रभावित पात्रहरु भेट्न सकिन्छन। वान पिसमा तेन्गु जस्तै देखिने उसोप नामको एउटा पात्र छ। उत्पति जस्तो भएपनि तेन्गु जापानको कला र सस्कृतिको एक रोचक चरित्र हो भन्दा फरक पर्दैन।
के तपाईको हातमा यो मासुकाके लाईन छ ? यो रेखालाई के भन्छन जापानिजहरु ?
जापानको नया युग “रेइवा” (令和時代) जापानीज के सोच्छन ?
जापानीज शब्द दाईजोउबुको अर्थ के हो ?
हजुरहरुलाई हात हेर्ने सम्बन्धमा कति कुरा थाह छ ? के हजुर हात बाट मानिसको भबिस्य हेर्न सकिन्छ भन्ने कुरामा विश्वास गर्नु हुन्छ। हात हेरेर मानिसको फर्च्युन बताउने संस्कृति कहाँ र कहिले सुरु भयो भन्न निकै कठिन छ। मानिसहरु यो कला पुरानो ईजिप्टबाट सुरु भएको हो भन्दछन। यदि हजुरको हातमा निरलाई पाईने केहि रेखाहरु छन् भने…
टोकियोका यी साना तर राम्रा ६ कफी सप 2019-05-12